Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino – FJKM Ambavahadimitafo Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino |
Publié le 02 août 2020 à 10:08
Samy hitarika ny fanompoam-pivavahana isan-tokan-trano isika manaraka izao fandaharana iombonana izao. Ny toriteny entin’ny mpitandrina Rakotoarisoa Alain kosa dia arahintsika etsy ambany.
« Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo @ Anarako, dia ao afovoany Aho » Matio 18:20
Lohahevitra : « Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino »
– Salamo 66 and 8- 12
– Hira 824
– Hira 177 and 4
Daniela 6:17- 25
Matio 2:13- 15
Asa 20: 17 – 24
– Hira 823 and 2
Fanekem- pinoana laharana faha 1
– Hira 486
– Fanolorana ny Rakitra : vavaka
« 7Dia nandidy ny mpanjaka; ary nentina Daniela ka natsipy tao an-davaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin’i Daniela hoe: Andriamanitrao Izay tompoinao mandrakariva anie hamonjy anao. 18Ary nisy vato natampina ny vava-lavaka; ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin’ny fanombohan-kaseny sy tamin’ny fanombohan-kasen’ny andriandahiny, mba tsy hovana ny teny ny amin’i Daniela.19Dia nody tany an-dapany ny mpanjaka ary tsy nitendry hanina mandritra ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany, ary tsy nahita torimaso izy. 20Dia nifoha maraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin’ny lavaky ny liona. 21Ary nony tonga teo amin’ny lavaka izy, dia niantso an’i Daniela tamin’ny feo malahelo; eny, niteny ny mpanjaka ka nanao tamin’i Daniela hoe: Ry Daniela, mpanompon’Andriamanitra velona ô, moa Andriamanitrao Izay tompoinao mandrakariva mahavonjy anao amin’ny liona va? 22Namaly ny mpanjaka Daniela hoe: Ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anie hianao. 23Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan’ny liona tsy handratra ahy, satria fahamarinana no hitany tamiko; ary teo anatrehanao koa, ry mpanjaka ô, tsy nanao ratsy aho. 24Dia faly indrindra ny mpanjaka, ka nasainy nakarina avy ao an-davaka Daniela. Dia nakarina avy tao an-davaka Daniela, ary tsy hita nisy naratra izy, satria nino an’Andriamaniny.25Ary ny mpanjaka nandidy, ka nentina ireo lehilahy niampanga an’i Daniela ireo, dia natsipy tao an-davaky ny liona izy mbamin’ny vadiny aman-janany, ary ny liona nanankery taminy ka nanapatapaka ny taolany, raha tsy mbola nipaka tamin’ny vodin’ny lavaka akory aza izy », Daniela 6 : 17-25
– Hira 643